बच्चाको शल्यक्रिया गर्ने रकम नहुँदा परिवार तनावमा – Sulsule
सुलसुले २०७७ भदौ १४ गते १५:१८ मा प्रकाशित
इलाम, भदौ १४
इलाम नगरपालिकाका तीन वर्षीय बालकमा मिर्गौलाको क्यान्सर देखिएपछि उपचारार्थ खर्च जुटाउन समस्या भएको छ । सात महिनादेखि काठमाडौँस्थित कान्ति बाल अस्पतालमा उपचारार्थ बालकको उपचार खर्च अभाव भएको हो । क्यान्सरको शल्यक्रियापूर्व ‘किमोथेरामी’मा रकम बढी खर्चिनु परेपछि खर्च जुटाउन झनै समस्या परेको हो ।
शल्यक्रिया गर्न किमोथेरापी छ पटक गर्नुपर्ने अस्पतालले जनाएको छ । “छ साइकल त किमो नै गर्नुपर्छ । खर्च जुटाउन गाह्रो छ”, बालकका बाबु गोपाल श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार एकपटकको किमोथेरापीमै करिब रु. ४० हजार खर्च लाग्छ । त्यसपछि शल्यक्रिया गर्नसमेत रु. १२ लाख हाराहारीमा रकम लाग्ने अस्पतालले राससलाई जनाएको छ । “बिरामीको अवस्था किमो गराउँदा ‘नर्मल’ भयो भने मात्र रु. ४० हजारले पुग्ने हो”, गोपालले भने, “अरू बिराम देखिँदा त एक किमोमै डेढ लाखसम्म खर्च लाग्छ ।”
अहिलेसम्म उपचारमा रु. १० लाख खर्च लागिसकेकाले शल्यक्रियाका लागि रकम जुटाउन अत्यन्त गाह्रो भएको गोपालको भनाइ छ । आर्थिक स्थिति कमजोर भएका उनको हालसम्म सहयोगबाटै रकम जुटाएको भए पनि शल्यक्रियाका लागि पर्याप्त छैन । अहिलेसम्म रु. तीन लाखभन्दा बढी रकम उठिसकेको छ तर त्यसले शल्यक्रियासम्म नपुग्ने भएकाले उपचार कसरी गर्ने दोधारमा परेको गोपालको भनाइ छ । अहिले गोपाल र श्रीमती नै बच्चाको उपचारका लागि काठमाडौँमै छन् ।
परिवारका सबैको सहयोग मिल्दा पनि रकम नजुट्दा छरछिमेकी र आफन्तको सहयोग मागेको उनको भनाइ छ । बच्चा बचाउनका लागि सबै पक्षबाट सहयोग गरिदिनका लागि परिवारले सबैलाई आग्रहसमेत गरेको छ । बालकलाई सहयोगका लागि एनआइसी एशिया बैंकको खाता नं. २७८५७५०८८६०९७००१ मा रकम पठाइदिनुहुन आग्रह गरिएको छ ।